Maya. 3 Special Edition - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 3 Special Edition
KU SOO DHAWOW nuqulkeenna koowaad ee Gaarka ah
Sida daaweyn xagaaga dambe, Hay'adda Reward Foundation waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay kafaala qaadayso waxqabadka Edinburgh ee 'The Coolidge Effect'.
Saamaynta Coolidge ee Wonder Fools ayaa toddobaadkan ku jira Tiyaatarka Kulul ee Edinburgh
Reward Foundation wuxuu ku faraxsan yahay inuu yahay kafaalad-qaade loogu talagalay ciyaar xiiso leh oo cusub Saameynta Coolidge by Wonder Wonder. Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad timaado oo aragto. Faahfaahinta taariikhaha iyo goobaha hoos ku xusan.
2017, pornography waxay sii korodheysaa heerka qiyaasta: UK gudaheeda, wax ka badan 7 million porn porn waxaa loo arki karaa maalin kasta. Sababtoo ah helitaanka jinsiga ee jinsiga ayaa kor u kaca, sidaas awgeed waa noo diidanahay inaan ka hadalno. Saameynta Coolidge wuxuu doonayaa inuu jabiyo jadwalkan.
Marka laga hadlayo waxa uu ku dhejiyo daroogada internetka in ay noqoto warshad badan oo bil walba ah Saameynta Coolidge. Xaaladahan dabiiciga ah, oo ah istiraatiijiyadda dabeecadda dabiiciga ah, ayaa loogu talagalay inay naga raadiso 'lamaanayaasha' sheekooyinka 'mawqifka ah marka shaqadayada bacriminta u muuqato in la sameeyo. Waxay u shaqaysaa by dhisidda dulqaadka, ama la jilciso, isla qofka ama kicinta oo joogitaankiisu uu ka yaraado 'abaal-marinta' maskaxda asaasiga ah. Wakhti ka dib waxaan ku helnaa rabitaan yar oo aan ka yareyneyno isla jinsiga galmada.
Waxaa ka shaqeeya wareysiyada lala yeeshay dadka udubdhexaadka ah, kuwa ku takhasusay, khabiirada caafimaadka maskaxda, barayaasha wacyiga dhibaatada iyo aqoonyahanno, sheekooyinka khaaska ah iyo aragtida gaarka ah waxaa loo sheegaa 4 sheekooyinka isku xidhka: George, oo ah dhalinyaro fara badan oo dhalinyaro ah; Gary, aabihiis ayaa lagu waayay moolka uu cunsuriyada u leeyahay; Gail, wax soo saare porno leh iyo Retrospect, oo ah muxaadaro hore u jilicsan oo doonaya inaad fahamto.
Saameynta Coolidge waxay isticmaashaa isku-dhafan sheeko-sheeko, gabayo iyo saynis si loo baaro sida sawir-gacmeedka qaawan uu u saameynayo caafimaadka maskaxda, xiriirka iyo khibradaha galmada. The Wonder Fools, koox xiiso leh oo cusub oo tiyaatarka ah, waxay qabatay dhacdadan casriga ah ee casriga ah waxayna u noqotay inay noqoto ciyaar xiiso leh oo dareen ah oo cusub.
Bandhigga waxaa la siiyay Amaan Gaar ah oo qayb ka ah "Abaal-marinta The Suitcase Prize" ee Tiyaatarka New Wolsey ee Ipswich ee Bandhigga PULSE ee 2017. Waxaad ka arki kartaa goobaha soo socda:
Tifaftirka Weyn, Edinburgh: 20-22nd September 2017
Macroberts Arts Center, Stirling: 20 Oktoobar
Tiyaatarka Cusub ee New Diorama, London: 15 November
Tikidhada iyo Macluumaadka: wonderfools.co.uk